Date: 23 janvier 2018 - 04:55
Vehivavy no manoratra ary efa niaraka tamin’olona nandritra ny 8 mois teo ho eo.
Nandeha niaraka nivoaza zaho sy io olona miaraka amiko io. Niaraka nandihy dia niara-nisotro. Gaga anefa aho noho ny maraina my andro fa tsy nisy vola intsony tao anaty compte-ko. Hay ny toaka rehetra nosotroinay dia novidiany tamin’ny carte-ko daholo.
Izy moa mbola miasa Sabotsy ka lasa niasa maraina izy ary tsy nisy fotoana niresahana.
Nantsoiko phone izy avy eo ary nolazaiko azy fa laniny daholo ny volako. Niala tsiny izy anefa aho mbola tezitra satria vola sakafoko no laniny. Noho ny hody izy ny hariva dia nasaiko nitondrany sakafo aho. Tsy nitondra moa izy fa nasainy tamy restaurant zaho. Nasainy ni-commande dia avy eo hoe entina mody ilay izy dia any mihinana.
Toa vao maika zaho tezitra hoe raha hisakafo any an-trano dia maninona raha ni-commande fotsiny dia nentina nody fa tsy niantso ahy ho avy (ny andro amin’io mangatsiaka be, ny lanezy avy). Ny niafarany moa dia nijanona nisakafo irery tamin’ilay restau zaho fa izy nody ary tsy nihinana akory. Nomeny vola sakafoko mahampy roa andro aho dia lasa izy.
Saika hody tany antranoko aho anefa toa nalahelo azy indray dia lasa nody tany aminy. Vao niditra ny varavarana aho dia hitako izy eo ambony fandriana toa sahala amin’ny mivavaka izany. Mikoropaka izy nahita ahy ary nampirina zavatra haingana. Modiako tsy hita fa nofihiniko fotsiny izy dia nanao azafady aho.
Noho ny resy tory izy dia nosavaiko ilay zavatra nataony teo ampandriana. Nojerevako tamin’ny google dia toa karazana ody avy any aminy (tsy gasy izy no tsy Frantsay). Lasa tena matahotra azy aho hatramin’izao. Nolazaiko azy fa tsy hiaraka aminy intsony aho.
Izay ny fotoana farany niresahanay farany. Tena tezitra aminy aho sady malahelo koa anefa. Voatery namoaka ny economie kely mba hiantsenana sakafo.
No-bloquer-ko daolo na phone na Facebook na messenger..... fa tena lasa matahotra azy aho. Inona no tokony ataoko fa mbola mahatsiaro malahelo azy aho na izany aza.
Miala tsiny fa lava be
Re: Azon’ody ve?
Date: 23 janvier 2018 - 06:45
Juste fanontaniana kely : autochtone ve ilay olona miaraka aminao ?
Raha tena marina ilay ody dia tsara ny décision-nao. Tena aleo mandositra lavitra mihitsy. Raha aty amerika avaratra ianao, maro ny olona mpiavy na malagasy na olona hafa mbola azo iarahana. Io fahasamihafana io no hitako olana raha aty.
Ny autochtone manao ny ataony, ny vazaha manana ny toetrany, ireo immigrants maro samy manana ny fisainana nitaizana azy, izay no mahatonga ilay individualisme.
Asio pause kely aloha ilay resa-pitiavana dia avy eo manarina indray. 8 volana izany mora adino
Date: 23 janvier 2018 - 10:21
mety ny nataonao
de aza misotro taoka zan fa mba manjaha-tena e. aminzay ba ajain olona
Date: 23 janvier 2018 - 11:37
Izaho koa vao aingana no tratra ohatran’izany, ohatrany manaiky tatahana vola izany na dia itako aza fa tsy mety, izaho aty Asie miasa dia gasy ihany no nanao izany ahy. Soa fa afaka fa tena ritra tao aho angamba. Izao itako normal raha malahelo kely azy indraindray, tsy izy no alelovako fa le mamy kely teo, marina hoe nisy tsy nety nataony fa nisy kely nahafinaritra ihany koa, na dia analefahana ahy fotsiny aza. Mety toy izany koa ny nahazo an’I Anonymee, izaho mino fa rehefa mahita olona vaovao dia afaka izany.
Autochtone>> Aiza izany hoe misy mbola azo iarahana izany? Izaho mba te hiaraka amin’ny gasy ihany, fa somary kivy kely aho amin’ilay gasy ao mada, ilay tsara efa misy tompony moa ilay tsy misy tompony materialiste be, sa ve diso aho?
Date: 23 janvier 2018 - 11:40
Autochtone>> Aiza izany hoe misy mbola azo iarahana izany? Izaho mba te hiaraka amin’ny gasy ihany, fa somary kivy kely aho amin’ilay gasy ao mada, ilay tsara efa misy tompony moa ilay tsy misy tompony mba itako materialiste be.
Date: 23 janvier 2018 - 21:41
Izaho koa : Enao any Asie fa izahay aty amerika avaratra.
Mbola maro ny malagasy aty : Mpianatra, mpiasa mbola celibataire, divorcés. ilay fiainana individualiste mihitsy angamba no mahatonga ny olona ho celibataire na dia efa miasa aza.
Misy fahamarinany be ny remarque-nao farany io na dia tsy marina 100% aza. Taratry ny fahantrana daholo izany.
Date: 24 janvier 2018 - 04:31
Misaotra anareo mamaly sy manome courage.
Autochtone>>> Aty Asie koa aho no mipetraka ary Ethiopien (tsy dia misy hanavahana anay hoe samy hafa fiaviana)ilay niara tamiko..
Tena mbola malahelo azy aho anefa atao aona fa zay aloha ny zavamisy.
Aty koa moa tsy misy gasy firy fa mety hiandry fodiana any Mada afaka 6 mois ndray ngamba dia any mahita azy.
Date: 24 janvier 2018 - 06:24
Anonymee > Azoko an-tsaina. hahatsiarovako mission nandehanako tany afrika afovoany ny nosoratanao. Irery an-tanin'olona ny tena dia nanofa taxi mba hitsidika tanàna ny asabotsy tsy miasa. Nandeha nisakafo t@ restaurant iray dia nahita tovovavy lava, zarazara, lava volo toy ny vehivavy tanora merina teo @ latabatra iray tao anaty restaurant. avy aho dia nanatona sady niteny hoe "Salama eh" dia nitodika izy sady nanontany t@ teny frantsay hoe "pardon ?" dia nialako tsiny sady noteneniko hoe "désolé mais vous ressemblez vraiment à des femmes de mon pays" dia niteny izy hoe "je suis ethiopienne" de izay aho vao niteny hoe "je suis malgache, je viens de Madagascar" Dia avy eo nolaniako ny sakafoko dia lasa aho nivoaka, izy mbola niresaka t@ ilay namany teo.
tena mitovy be amintsika malagasy rizareo
Par: Tsy gasy
Date: 31 janvier 2018 - 17:33
Tena mialatsiny aho fa otrany mitapy koa enao.
Hita fa efa ody ve de mbola inona iany no alelovana azy. Mavita ny tsy fanso ireny fa tandremo. Matoa misy ny herin'ny maizina dia misy herin'ny mazava afaka manohitra tsara an'zany raha toa ianao ka matahotra.